योनी शक्ति - साहित्य - नेपाल
- निभा शाह
विष पुरुषहरु सुन
स्त्रीत्व मौन आगो भएको बेला
पुरुषत्व मौन आँधी भएको बेला
योनीकरको आर्तनाद सुन
विष पुरुषका विरासती विष पुरुषहरु हो सुन
योनीकरको आर्तनाद सुन ।
कुकुरबाट बलात्कार गराए । नांगो बनाए । ममाथि दुइटा कुकुर छाडिदिए । अनि मेरो इज्जत कुकुरबाट लुछ्न लगाए । अचेल म बाटोमा कुकुर देख्दा बौलाहाजस्तो हुन्छु, डरले काम्छु ।
यी बलात्कृत आर्तनादी शब्दहरुले मलाई छुँदै गए । के योनी विष पुरुषहरुको विष खन्याउने भाँडो हो ? के योनी पितृसत्ताको विषदानी हो ? इतिहासदेखि वर्तमानसम्म स्त्री देह आमा हो कि भाँडो हो ? स्त्री देह प्रेमस्पर्श हो कि प्रेमको दहन हो ? स्त्री देह मान्छे हो कि वस्तु हो ?
लालपुर्जाले जन्माएको पितृसत्ताको घेराभित्र योनी कब्जा र स्त्री देह कब्जामा तात्त्विक भिन्नता हुँदैन । यी दुवैको रुपमा भिन्नता देखिए पनि सारमा एकता हुन्छ । वैवाहिक संस्थाद्वारा पुरुषले स्त्रीको देह, योनी र गर्भाशय कब्जा गर्छ । यो संस्थाबाट पुरुषले स्त्रीको योनी कब्जा गर्छ । षोडसी सुन्दरी संस्थामा चाहिँ जो स्त्री सुन्दरी छे, त्यसलाई ठूलो दाममा ठूला मालिकहरुले आलोपालो गरी स्त्रीदेह खरिद बिक्री गर्छन् र आलोपालो सहमतिमा भोग्या बनाउँछन् । यो संस्थाकी प्रतिनिधि पात्र माधवी र आम्रपालीहरु हुन् । विवाह संस्थाभित्र नियोग उपसंस्था छ, त्यसकी प्रतिनिधि पात्र माद्री र कुन्तीहरु हुन् ।
पितृसत्ताभित्र स्त्री देहको दैहिक एवं मानसिक उत्पीडनका लागि बनाइएका थुप्रै गठमठ छन् । निर्मला काण्डले पनि भन्छ, सिंहदरबार सरकार आफैँ गठमठ हो । पुरुषले स्त्री देहप्रति यतिविघ्न घृणा किन गर्छ हँ ?
कैलालीको घटना हो । म सानो छँदा बाटोमा एउटी केटी रुँदै–कराउँदै गरेको आवाज सुनेर सबै त्यतै हेर्न गए । म पनि एक थरुनी आमाको पछाडिपछाडि गटिया समातेर त्यहीँ गएँ । त्यो दृश्य देखेर एकदम डराएँ । एउटी केटी जोडजोडले चिच्याइरहेकी छन् । तिनै केटीलाई डोरीले बाँधेर जगल्टा लुछ्दै घिसारिरहेका छन् । ती केटीको कपाल लामो थियो । डोरीको तल रातो फुर्को थियो । कोही त्यही फुर्कोभन्दा माथिको भाग समातेर तानिरहेका थिए । चोलो च्यातिएर स्तन देखिन्थे । तिनी भयभीत र निरीह देखिन्थिन् । जस्तो, बाघको अगाडि बाख्रा परेको होस् । बिरालाको अगाडि मुसा परेको होस् । मलाई त ती पुरुषको हिंस्रक रुप देखेर डर लाग्यो । मेरो भयभीत र रुन्चे अनुहार देखेर ती थरुनी आमाले भनिन्, ‘डराइटो बाबु आऊ बुकु’ भन्दै बोकिन् । मचाहिँ बुकु लागेर आतंकित दृश्य हेरिरहेँ ।
यो समाज एक स्त्रीलाई घिसार्दै, तान्दै ल्याइरहेको दृश्य हेर्दै थियो । जुन उनी साङ्लामा बाँधेर तान्दै गरिएकी एक मुढा हुन् । ठूली भएपछि पो थाहा पाएँ, त्यो साङ्ली मुढा त जारी प्रथाको कानुनी प्रहसन रहेछ ।
तिनै साङ्ली मुढा १४ र १५ वर्षको हुँदा राम (मेला) हेर्न गएको बेला एक जना केटाले केटी तान्ने परम्पराअनुसार तिनको सप्को तान्दै संगी–साथीसँग मिलेर घिसार्दै–पछार्दै घर लगेछ । तर ती केटी त्यहाँबाट उम्की माइत गई बसिछन् । त्यो केटाको घरमा कहिल्यै फर्किनछन् । उक्त घटनाको दुई–तीन वर्षपछि ती केटी अर्कै केटालाई मन पराएर गइछिन् । सामाजिक रीतअनुसार ‘पोइल’ जानु स्वाभाविक हो । त्यसरी गएपछि सप्को तान्ने केटाले (साङ्ली मुढाको सप्को तानेबापत) ५ सय रुपैयाँ उनको लोग्नेसाग उपजारी लिएछ ।
घर समाज पितृसत्ता न हो । लोग्ने टिपेको केही समयपछि साङ्ली मुढालाई तिनका लोग्नेले बेस्सरी पिट्न थालेछन् । पिटाइको पीडा खप्न नसकेपछि तिनले नौलो पोई टिपिछन् । नौलो पोई त टिपिन्, त्यसपछि भूपू पोईले नौलो पोइसँग ५ सय रुपैयाँ सप्को तानेको उपजारी मागेछ । तत्कालीन कानुनअनुसार बाँकी आफ्नो जारीको रकम १ हजार रुपैयाँ पनि मागेछ । नौलो पोइली पक्षले भूपू पोइली पक्षलाई १ हजार रुपैयाँ जारी तिर्न तयार भयो तर उपजारी ५ सय रुपैयाँ तिर्न तयार भएन । त्यस कारण भूपू पोइली पक्षले ती साङ्ली मुढालाई घिसार्दै आफ्नो घरतिर लग्दै रहेछ ।
२५–३० वर्ष अघिसम्म पनि पहाडबाट मुवाल्याहरु हिउँदभरि गाईवस्तु ल्याएर तराई झर्थे । ती मुवाल्याले आफ्ना गाईवस्तु जसको खेतमा बाँध्थे, त्यसबापत खेतवालासाग अनाज लिन्थे । अनाज लिने मुवाल्याहरुचाहिँ रातमा गाईवस्तु कुर्न अस्थायी छाप्रो बनाएर खेतमा सुत्थे । एक रात मुवाल्याहरु छाप्रोमा सुतिरहँदा घोडसवारको एक समूह एक केटी लिएर उनीहरुको छाप्रो नजिक आएछ । त्यो समूहले ती केटीको मुखमा कपडा बाँधेर सामूहिक बलात्कार गरेछ । सलाईको काँटी बाल्दै स्त्री देह पोलेछन्, घाँटी न्याकेर मारेछन् । लासमाथि पिसाब फेरेर फेरि बलात्कार गरेछन् । बलात्कारपछि स्त्री देहलाई थुकेछन्, लात्तीले हानेछन् । लाशलाई बोरामा बाँधेर लगेछन् । उक्त घटना मुवाल्याहरुले त्रसित भएर छाप्रोभित्रबाट हेरेको हेर्‍यै भएछन् र बिहान गाउँलेलाई सूचित गरेछन् ।
क्रिसमस इभ थियो । म एक्लै सिकागोको सडकमा हिाडिरहेकी थिएँ । चार जना केटाहरु आएर मेरो कन्चटमा बन्दुक राखेर बस्न लगाए । तिनीहरुमध्ये एउटाको हातमा बन्दुक भएकाले मैले कुनै शारीरिक प्रतिक्रिया जनाइरहेकी थिइनँ । तिनीहरुले मलाई लुछे, पिटे र जमिनमा पछारे । म बलात्कृत हुँदै गएँ । यो बलात्कृत हुनुको अनुभूति हो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकी हेयर स्टाइलिस्ट सपना भवनानीको ।
यस्ता थुप्रै दैहिक एवं मानसिक पीडाका अनुभूति छन्, स्त्रीसँग । कुनै विष पुरुषले स्त्रीको यौनांगमा खुर्सानीको धुलो छरेको अनुभूति, कुनै विष पुरुषले कंकड हालिदिएका अनुभूति छन् । यो पितृसत्ताको दुनियाँमा स्त्रीसँग विषैविषको अनुभूति छ । पुरुषहरु आफू त बलात्कार गर्छन् नै, कुकुरलाई समेत बलात्कारी बनाएर स्त्री देह लुछ्न लगाउनुले प्रमाणित गर्छ । पुरुष देहले स्त्री देहलाई घृणा गर्छ तर किन ? पुरुष मनोविज्ञान थाहा भएन । चाहन्छु, माधवी हुने प्रक्रियामा पूर्णविराम लागोस् ।
उनी जातप्रथाअनुसार ‘तल्लो’ तमिल महिला थिइन् । उनीजत्तिको काली सुन्दरी मैले श्रीलंकामा देखिनँ । उनी प्रत्येक दिन मकहाँ शौचालय सफा गर्न आउँथिन् । मैले उनलाई मनबाट निकाल्न सकिनँ । उनी आउने बाटामा केही न केही उपहार राखिदिन थालेँ । तर ती महिला उपहार तिरस्कार गरेर हिँड्थिन् ।
एक बिहान मैले उनको कलाई (नाडी) जोडले समातेर आँखामा हेरेँ । आँखाभित्र कुनै भाषा थिएन । उनी बिनामुस्कान एक ओछ्यान भइन् । यो एक पुरुष र एक मूर्तिको सम्भोग थियो । यो अनूभूतिपछि मैले यस्तो कहिल्यै गरिनँ । यी अभिव्यक्ति नोबेल पुरस्कार विजेता कवि पाब्लो नेरुदाका हुन्, जुन उनको आत्मकथामा छ । अब भन्नु के ? को विष पुरुष, को अमृत पुरुष ? छुट्याउनै गाह्रो । यत्ति भन्न सकिन्छ– परिवार, निजी सम्पत्ति र राज्यको उत्पत्तिमा एंगेल्सले भनेझैँ लालपुर्जाको व्यवस्था मात्र एक कारण होइन, महिला अन्तिम उपनिवेश हुनुमा । हो, लालपुर्जा महिला उत्पीडनको प्रमुख कारण हो तर सबै होइन । पुरुष देहभित्र पनि केही त्यस्तो तत्त्व छ, जसले महिला हिंसा गर्छ, जसको औषधीबारे शोध भएको छैन वा मैले पढ्न पाइनँ ।
मध्याह्नको तप्त धूपमा
तप्प तप्प चुहिन्छ
त्यो चुहानको पल
सूर्यको प्रसव पीडाको पल हो,
हो यही प्रसव पीडाले जन्माउँछ दियालो
अब भन त महाशय
यो सृष्टिको आगो
कसको गर्भाशयले जन्मायो ??
प्रकाशित: मंसिर १७, २०७६